Emergency Rent Assistance (Somali/Soomaali) | Saint Paul Minnesota
Emergency Rent Assistance (Somali/Soomaali)
Barnaamijka Caawinta Kirada Degdegga ah ee Degmada Saint Paul – Ramsey hadda waa xiran yahay
Kiraystayaasha soo gudbiyay codsi kahor Jimcaha, Abriil 22, 2022 5:00 g.d. wakhtiga kama dambaysta ah waxa la sii wadi doonaan in codsiyadooda laga baaraandego, iyadoo ku xiran helitaanka lacageed. Wakhtiga habayntu waa ku dhawaad 30 maalmood.
Kiraystayaasha cawimaad ka codsaday barnaamijka kaalmada kiraynta degdega ah ee COVID-19 loogama saari karo lacag bixin la'aan kirada ilaa Juun 1, 2022.
Gargaarka Degdegga ah ee Degmada Ramsey
Degmada Ramsey waxay leedahay barnaamijyada Caawinta Degdegga ah iyo Caawinta Guud ee Degdegga ah ee deganayaashu xaqa u leeyihiin. Si aad wax badan uga barato, booqo: https://www.ramseycounty.us/residents/assistance-support/assistance/financial-assistance/emergency-assistance
Barnaamijyada kale ee Caawinta Kirada Degdegga ah
Mashruuca Zero Balance
Mashruuca Zero Balance wuu wada bixiyey dhammaan lacagihii oo waa la xiray.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan lacagihii la qaybiyey ama 1099 kaagii, fadlan la xiriir ZeroBalanceProject@FHFund.org.
CaawintaKiradaMN waa la xiray codsiyada cusub.
Kiraystayaasha soo gudbiyay arjiga CaawimadaKiradaMN ka hor Jimcaha, Janaayo 28, 2022 saacadu markay tahay 9:00 g.d. kama dambaysta ah waxay sii wadi doontaa in codsigooda laga baaraandego, iyadoo ku xiran helitaanka lacageed. Kireystayaasha uma baahna inay wacaan 211 ilaa ay qabaan su'aal degdeg ah.
Kiraystayaasha hore looga caawiyay RentHelpMN ama lagala noqday codsigoodii ka dib Janaayo 28keedii kama dambaystii waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan codsi cusub 5:00 p.m. Abriil 22, 2022 ee barnaamijka gargaarka Degmada Ramsey-Saint haddii gargaar dheeraad ah loo baahdo.
Fiiro gaar ah: Kiraystayaasha xaqa u leh waxay heli karaan ugu badnaan 18 bilood oo kaalmada kirada degdeg ah dhammaan barnaamijyada kaalmada kirada.
Cusboonaysiinta Joojinta Kasaarida
Sharci burinaya amarada fulinta ee Guddoomiyaha Walz kaasi oo ka hortaggaya ka saarida guryaha kirada ah ee gobolka oo dhan ayaa dhaqan galay Juun 30, 2021. Tani waxay bilawday hannaan ka baxsan joojinta ka saarista ee COVID-19.
Joojinta Kasaarista Watiga loo qoondeeyay ee Off-Ramp
Juun 30, 2021 – Mulkiilayaashu waxay siin karaan ogeysiis ah joojinta heshiiska kirada ama dib u cusboonaysiin la'aanta heshiiska kirada guryaha ku xadgudbay heshiiska (marka laga reebo bixin la’aanta kirada). Mulkiilayaasha guryaha ayaa sidoo kale bilaabi kara nidaamka ka saarida kireystayaasha kirada ku maqantahay, ee u qalma barnaamijka kaalmada kiraynta degdega ah ee COVID-19, laakiin diidan inay codsadaan ama raacaan nidaamka codsiga.
Luulyo 14, 2021 – Ka saarid waxaa loo gudbin karaa qoysaska si dhab ah ugu xadgudbay heshiisyadooda (marka laga reebo bixin la’aanta kirada).
Ogosto 13, 2021 – Mulkiilayaasha gurigu waxay joojin karaan heshiisyada kiraystayaasha kirada dib uga dhacay oo aan u qalmin barnaamijka gargaarka degdegga ah ee COVID-19.
Sebtembar 12, 2021 – Mulkiilayaashu waxay xarayn karaan guri ka saarida kiraystayaasha kirada dib uga dhacay oo aan u qalmin barnaamijka kaalmada kiraynta degdega ah ee COVID-19.
Oktoobar 12, 2021 - Dhammaan xannibaadaha joojinta heshiiska kirada iyo tallaabooyinka ka saarida waa la qaaday marka laga reebo in mulkiilayaashu aysan xerayn karin ama sii wadi karin tallaabada ka saarida qoyska haysta arjiga la sugayo ee leh barnaamijka kaalmada kiraynta degdegga ah ee COVID-19.
Hadda waa waqtigii aad codsan lahayd haddii aad u baahan tahay gargaar!
Juun 1, 2022 - Dhammaan xannibaadaha ku saabsan falalka ka saarista waa la qaaday.